Wicknell Chivayo Archives - Zimbabwe Voice
zimbabwevoice_1June 25, 2021
Police, prisons ‘refuse’ to jail ex-ZESA boss despite his conviction by High Court
NINE days after the High Court dismissed his appeal against conviction and an effective one year jail sentence, former Zimbabwe Power Company (ZPC) board chair Stanley Kazhanje cannot find anyone to take him to jail with the police, the courts and even prison officers saying they have no authority to shove him in a cell. ZPC is a subsidiary of…
zimbabwevoice_1June 15, 2021
Former ZESA boss jailed 3 years over Gwanda Solar project corruption
FORMER Zimbabwe Power Company (ZPC) board chair Stanley Kazhanje will now have to serve his three-year-jail term after the High Court on appeal, found overwhelming evidence proving that he concealed his prior involvement in the Gwanda Solar Project. The ruling yesterday comes after Kazhanje appealed against conviction and a three-year imprisonment imposed on him for failure to declare to his…
Chivayo back in court, denies paying US$10,000 bribe to former ZESA boss
THE trial of Intratrek Zimbabwe managing director Wicknell Chivayo, who is accused of bribery, resumed yesterday with the businessman denying all charges. Chivhayo, who is being charged together with former Zimbabwe Power Company board chairman Stanley Kazhanje, who was last year convicted of similar allegations, appeared before magistrate Ngoni Nduna. In his defence, Chivayo denied depositing US$10 000 into Kazhanje’s…